Sidee buu u shaqeeyaa shaandhada saliidu?
Saliida mishiinka ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaara matoorka. Waxay ka caawisaa qaboojinta mashiinka iyadoo loo wareejinayo kuleylka. Ku xirida farqiga u dhexeeya giraanta bistoolada iyo darbiga silsiladda; dhuuqista wasakhda; iyo joojinta walxaha danbas sida haraaga gubashada. Wasakhda waxay noqon kartaa noole sida fangaska iyo bakteeriyada hawada ku jirta. Qaybaha aan dabiici ahayn waxay noqon karaan waxyaabo badan, oo ay ku jiraan boodh lagu soo jiido mashiinka inta lagu jiro hawlgalka.
Banaanka miiraha saliida waa gasac bir ah oo leh goomayaal lagu dhejin karo dusha sare ee matoorka. Goomayaal ayaa ku dhegan salka daasadda waxaana daloola ka sameysan agagaaraha aagga. Daloolka dhexe waxaa lagu duubay si uu ula midoobo isku-dhafka shaandhada saliidda ee mashiinka. Weelka gudihiisa waa shaandho miiraha, tan ugu caansan ayaa ah fiilooyinka synthetic. Mashiinka mashiinka mashiinka saliida wuxuu si toos ah ugu dhaqaajiyaa shaandhada kadibna wuxuu galaa shaandhada saliida ee daloolka wareega saxanka salka.
Saliida wasakhda ah waxay soo martaa warbaahinta miiraha ka dibna waxay ku soo noqotaa daloolka dhexe ee ay dib ugu gasho mashiinka. Caadi ahaan, miirayaasha waxay leeyihiin laba nooc oo warbaahineed: aasaasi ah iyo sare. Dhex-dhexaadka aasaasiga ah wuxuu xannibi karaa walxaha yar yar sida 25-30 mikroon (cabirka timaha dadku waa 65-70 microns) iyo dhexdhexaadka labaad wuxuu xiri karaa walxaha yar yar ee 5-10 mikroon.